१) औषधी नलिनुस्
रक्सी धेरै वा थोरै जति पिएपनि लगत्तै औषधी नखानुस् । रक्सी पिएर टाउको दुख्यो वा अरु कुनै समस्या आयो भनेर तुरुन्तै कुनै औषधी लिनुभयो भने तपाईको ज्यान पनि जान सक्छ । बेलायतको नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थले गरेको अनुसन्धानमा रक्सी र औषधीको फ्यूजन शरीरमा भए दिल, दिमाग दुवैमा असर गर्छ भनेर पुष्टि गरिएको छ । यति मात्रै होईन, दीर्घ रोगको समेत खतरा बढ्छ ।
२) गाडी नहाक्नुस्
रक्सी पिएपछि मानसिक सन्तुलन थोरै भएपनि बिचल्लित हुन्छ । यस्तोमा गाडी आफैैले नहाक्नुस् । तपाईले गाडी हाँक्दा तपाईको लागि त खतरा छ नै, अरु कसैको ज्यान लिने काम समेत हुन सक्छ । तपाई आफू रक्सी पिएर अरुको ज्यान किन लिने ?
३) फोटो नखिच्नुस्
रक्सीको नसामा लठिएर कहिल्यै फोटो नखिचाउनुस् । झन् फेसबुक, ट्वीटर वा अन्य कुनै साईटमा अपलोड गर्ने काम त सोच्दै नसोच्नुस् । यसो गर्नुभयो भने तपाईको अफिसको बोस देखी घरसम्म कुरा पुग्छ । र, तपाईले जागिरबाट हात धुनेदेखी घरका सदस्यको हेला समेत खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
४) पुरानो प्रेमबारे नबोल्नुस्
रक्सी पिएपछि मान्छेहरु मदहोसी हुन्छन् । कतिलाई पुरानो प्रेमका बारेमा झल्को आउँछ । तर, सावधान ! यस्तो बेला पुरानो प्रेमीसँग फोनमा वा प्रत्यक्ष कुरा नगर्नुस्, कुरा झन् बिग्रन सक्छ ।
५) कसैमाथी नझम्टनुस्
रक्सीले मान्छेलाई केही समयका लागि ‘बलियो’ बनाइदिन्छ । यस्तोमा तपाई बाउन्सर वा अरु कोही माथी जाइलाग्नुभयो भने धेरै महँगो सावित हुन्छ । त्यसैले संयमित भएर पिउने गर्नुस् ।